Blockchain Observatory uye Forum Ichaunza EU kuti "Shongwe" pamusoro Blockchain Tech - Blockchain News
EU chinonyengera Blockchain Observatory pamwe Ethereum Startup
ConsenSys, mumwe dzepamusorosoro startups ari ethereum mararamiro, Achashanda pamwe European Commission pamusoro wayo EU Blockchain Observatory uye Forum, izvo kushanda zvapamutemo China.
The-Gore maviri vanoedza achaita mari kuti € mamiriyoni 340 ($425 miriyoni) mu blockchain mabasa. The Commission rokutanga vakazivisa chirongwa patsime rokupedzisira, paaitaura chido kwayo chokuwedzera zvechechi ruzivo blockchain uye vakagovera ledger michina.
“Somunhu mutambi anokosha blockchain vemunharaunda, ConsenSys achaunza simba kuzvipira blockchain budiriro, zvikukutu unyanzvi uye kubatana munyika yose blockchain mararamiro, uye entrepreneurial nzira yokuita pamwe wekuongorora uye nyanzvi mune EU uye pasi rose,” neEC akati China mune mashoko kuratidza Kudyidzana.
ConsenSys, pasi pose “asingashumbi kugadzirwa Studio” kuti anovandudza Software zvikurukuru nokuda ethereum blockchain, rakavakwa Joseph Lubin, uyo CoinDesk profiled nokuda kwayo Most Simba iri Blockchain 2017 mudungwe.
Chiziviso The Commission wacho zvakananga akasimbisa chido kwayo akaunganidza vanhu blockchain kuti abatsire chete musika yeEuropean, uye akacherechedza kuti chinangwa chikuru pamusoro Observatory uye Forum riri kuvaka pamusoro yaivapo zvirongwa kuti chokwadi vanoshanda ayambuka miganhu.
Commissioner nokuti Digital Economy uye Society Mariya Gabriel yakati:
“Ndinoona blockchain sezvo mutambo kuchinja uye ndinoda Europe kuva nechemberi kwayo budiriro. Tinofanira kusimbisa kodzero kugonesa kwezvakatipoteredza - a Digital Single Market nokuda blockchain kuitira kuti vanhu vose vanogona kubatsirwa, pachinzvimbo Pacchiwaku okutanga-tanga. The EU Blockchain Observatory uye Forum riri danho rinokosha kuti divi.”
Valdis Dombrovskis, ane EC mutevedzeri wapurezidhendi aitarisira mari pakusimba, Minamato zvemari uye Capital Markets Union, nezvimwe zvirongwa, uyo kare akataura EU kufarira blockchain zvemichina, akati ari Observatory kuchaitawo kutungamirira EU policymaking.
Iye akarumbidza pfungwa blockchain michina, vachiti “pakati zhinji ruzivo uchityaira digitaalinen utsanzi, blockchain ane zvinogona kuva zvechokwadi transformative paminamato zvemari uye misika.
Previous Post:Ups Files bvumidzwa kugamuchira Bitcoin nokuda lockers
Next Post:Double Digit Kurasikirwa Tsvaira Crypto Chakanaka Market